PVTV ၏ မိသားစုစကားဝိုင်း – PVTV Myanmar
·5months ago ·31 Comments
ကိုမင်းကိုနိုင်၊ R-ဇာနည်၊ ဒေါင်း ၊ မြနှင်းရည်လွင်တို့ တော်လှန်ရေး ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေရဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး နွေးနွေးထွေးထွေး မိသားစုစကားဝိုင်း
Like – 37K Share – 4577
U Htay Lynn says:
2021-08-21 at 9:00 PM
နန်းတော်တခုလုံး ဝလုံးတွေ နဲ့ ပြည့်သွားစေရမည်…
Ba Swe says:
2021-08-21 at 9:01 PM
နှစ်ဆတိုးတာဟာလေ ကျွန်တော်တို့မြန်မာ တန်ခိုးပါဗျ‼️
2021-08-21 at 9:28 PM
နန်းတော်တစ်ခုလုံး ဝ လုံးတွေအပြည့်ဖြစ်နေစေရမည်
Linn Nay Thit says:
ကိုက်ား ကိုပါ ထည့္လိုက္ရမွာ
အကိုတွေအမတွေ ကျမ္မာချမ်သာကြပါစေ အရေးတော်ပုံအောင်တော့မည်
Tu Awng says:
ရက်အမြန် သတ်မှတ် လိုက်တော့ လက်ယားနေပြီ
စိတ္ဓာတ္ကေလး ခ်စ္စရာပါ ေဒါင္းေရ
2021-08-21 at 10:18 PM
နန်း​တော်တစ်ခုလုံး ဝလုံး​တွေပြည့်​နေ​စေရမည် အ​ရေး​တော်ပုံ​အောင်​တော့မည်
ဟုတ္ကဲ့ပါ နန္းေတာ္တစ္ခုလံုး ဝလံုးေတြ ျပည့္သြားမွာပါ
Ba Oo says:
အနုပညာ မောင်နှမတွေ ​ကျမ်းမာကြပါစေ
Kaythi Myint says:
2021-08-21 at 10:47 PM
Theintheinwin Myeik says:
2021-08-21 at 11:00 PM
2021-08-21 at 11:18 PM
စစ္တပ္ကိုအာဏာရွင္လက္ထဲက အျမင္မွန္ရေအာင္ ျပည္သူဘက္ပါေအာင္ မ်ားမ်ား လုပ္သင့္တယ္
တိုင်းပြည်အတွက် အနစ်နာခံပြီး ကြိုးစားနေကြတဲ့ ၇ ရက်သားသမီးအားလံုး ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ 🙏🏽🙏🏽🙏🏽
2021-08-22 at 12:25 AM
2021-08-22 at 6:08 AM
မာဆက် ကောင်လေး says:
2021-08-22 at 7:33 AM
ကိုRဇာနည် ပိုပီး၀လာတယ်ခင်ဗျာ။ နခမ်းမွှေးတွေရှည်လာတယ်။ ဘေးရန်ကင်းရှင်းပါစေအကို
2021-08-22 at 7:35 AM
ဦးမင်းကိုနိင် ပြည့်သူသန်း50မှ လေးစားလျှက်ပါ။ တပ်‌မတော်ပြိုကွဲပါစေ။ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ဟု
Zin Nwe Tun says:
2021-08-22 at 7:42 AM
နန္းေတာ္တစ္ခုလံုး ဝ လံုးေတြျပည့္သြားေစရမည္
2021-08-22 at 9:53 AM
နန်းတော်တစ်ခုလုံး ဝ လုံးတွေ အပြည့်ဖြစ်နေမေရမည်။
Myo Myat Oo says:
2021-08-22 at 10:48 AM
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေက နှစ်ဘက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဘက်သုံးဘက်ကို ရုန်းကန်၊ တွန်းလှန်ကြရတာပါ( စစ်အစိုးရ၊ ရောဂါကပ်ဘေး၊ တော်လှန်ရေး) ဒါတွေကို လုပ်ပြီး အဆုံးထိ အမြစ်ဖျတ် တွန်းလှန်သွားမှာပါ။ ပြေလျှော့ပေးတာလေးတွေကို လက်မခံပဲ ဆက်မိုက်ရင်တော့ နောက်မှ ပြည်သူတွေက ရက်စက်လိုက်တာ လာမပြောပါနဲ့၊ အဓမ္မ တို့ရဲ့ သွားရာလမ်း က သေတွင်း ပါ။ တစ်သက်တစ်ကျွန်း ထောင်ထဲထားလည်း မကျေနပ်နိုင်ပါဘူး။ သေမိန့် နဲ့သာ ထိုက်တန်သူတွေကို ကြိုးကွင်းစွပ်ပေးရမှာ ပါ။ အဲ့ကျတော့မှ နောက်ပြန်လှည့်၊ မှားသွားပါတယ်၊ တောင်းပန်ပါတယ် မရပါ။
2021-08-22 at 11:02 AM
great respect you all. thanks.
may God be with you all for be safe. fighting. we must win.
Lar Wah says:
စိတ်ချ အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမယ် စစ်သင်တန်းမတက်နိုင်ပေမဲ့ ရအောင်တော့ တိုက်မှာ
Good Good Naing says:
2021-08-22 at 2:35 PM
နန်း​တောိတခုလုံး ဝလုံး​တွေ ပြည့်​နေ​စေရမည်။ အ​ရေး​တော်ပုံ ​အောင်ရမည်။ ​အောင်ကို​အောင်ရမည်။ 💪💪💪👍👍👍👏👏👏
ယဥ္ျမတ္သီ ယဥ္ျမတ္သီ says:
2021-08-22 at 4:04 PM
2021-08-22 at 7:18 PM
နန္းေတာ္တစ္ခုလံုး ဝ လံုးေတြျပည့္ေနေစရမည္🙋‍♂️
Ahli BaBa says:
2021-08-22 at 7:35 PM
ကျက် သရေ ရှိ ကြပါတယ် .👍👍👍
နွေးဦး တော်လှန်ရေး says:
2021-08-22 at 7:38 PM
အားလုံးလည်း ဂရုစိုက်ကြပါ ခုလိုစကားဝိုင်းတွေလည်း အချိန်ခါ အကျလုပ်ပေးသင့်ပါတယ် ပြည်သူတွေလည်းသိချင်ကြမှာပါ
Ma Malay says:
2021-08-22 at 8:22 PM
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော် တို့မှာ လဲ အဲဒီလို စိတ်ရှိပါတယ်
မာလာ အောင် says:
ဖွဲတဆုတ်နိုင်သ၍ လက်ညှိုး​​တော့ကွေးနိုင်ပါ​သေးတယ်သားတို့သ္မီးတို့GZအ​ပေါင်းတို့​ရေ။ကျန်းမာသက်ရှည်​ဘေးကင်း​အောင်မြင်ပါ​စေ ဘဘ၊ ဘဘ​နော် အဘမဟုတ်ဘူး။
PVTV ၏ သတင်းကဏ္ဍ (၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၁)…